साझा अनलाईन २०७५ जेठ २१ गते मा प्रकाशित 574 पटक पढिएको
लिओनल मेस्सीलाई सधैँ लाग्ने गरेको एउटा आरोप हो, क्लबका लागि उनले धेरै राम्रो खेले, धेरै उपाधि दिलाए। तर, देशका लागि भने केही गर्न सकेनन्। केही अर्जेन्टेनीले सानैदेखि स्पेनमा हुर्केकाले मेस्सीलाई देशप्रति माया नभएकाेसम्म आरोप लगाउँदै आएका छन्।
सन् २०१४ को विश्वकप फाइनलमा जर्मनीसँग १–० ले पराजित हुँदा पनि उनीमाथि त्यही अाराेप दोहोरियो। त्यसको केही अघि मात्रै कोपा अमेरिकाको फाइनलमा पराजित भएका स्मरण अर्जेन्टेनीहरुको मस्तिष्कमा ताजै थियो। विश्वकपको फाइनलमा समेत पराजित भएपछि फेरि मेस्सीमाथि देशद्रोहीका नारा घन्कियाे। ठाउँमा ठाउँमा उनकाे पुत्ला दहन भयो।
यद्यपि विश्वकपमा मेस्सीले सक्दो प्रयास गरेका थिए। त्यसैकारण गोल्डन बल समेत जिते। तर, पुरस्कार लिन जादा मेस्सीका अनुहारमा कुनै चमक थिएन। निरास मुद्रामा उनले पुरस्कार लिए र केही दिनमै अन्तरार्ष्ट्रिय फुटबलबाट शन्यास घोषणा समेत गरे। तर, त्यसबेला अर्जेन्टेनी सरकार, प्रशिक्षक तथा शुभचिन्तकको व्यापक अनुरोधपछि उनी सन्यासबारे पुन:विचार गर्न बाध्य भए।
विश्वकप २०१८ काे छनाैटमा अर्जेन्टिना धर्मराएकाे स्थितिमा देखियाे। गर या मरको स्थितिमा पुगेको अर्जेन्टिनालाई इक्वेडरविरुद्धको खेलमा ह्याट्रिक गर्दै मेस्सीले विश्वकपमा पुन अाफ्नाे भूमिका सावित गरे। ३० वर्षे मेस्सीका लागि सायद रुस विश्वकप देश र आफ्नो नाममा विश्वकपको उपाधि चुम्ने अन्तिम अवसर हो। विश्वकपको अन्तिम तयारीमा रहेका मेस्सीसँग याे विश्वकपमा अर्जेन्टिना र मेस्सीको सपनाबारे गरिएको अन्तर्वार्ता:
के २०१४ मा उपविजेता बन्दाको पीडा अझैसम्म पनि बाँकी छ?
हाम्रा लागि त्यो एउटा खुला घाउ थियो जुन अहिलेसम्म पनि दुखिरहेको छ। हामी हाम्रो सपना पूरा गर्ने अन्तिम अवस्थामा थियौं। तर, यो फुटबल हो। उत्कृष्ट टोलीले पनि सधैँ जित्छ भन्ने हुदैँन। हामीले नतिजा स्वीकार्नु पर्छ र अघि बढ्नुपर्छ। त्यो विश्वकप उपाधि जाे हाम्रो होस् भन्ने चाहान्थे उनीहरू सबै रोए। म रोएँ, सबै अर्जेन्टिनी रोए। त्यो पिडा अझैँ ताजै छ।
अर्को विश्वकप नजिकै आइसक्यो। फेरि तपाईमाथि धेरै अपेक्षाहरु छन्। ती अपेक्षाहरुलाई पूरा गर्न कतिको तयार हुनुहुन्छ?
यसअघि पनि हामीले आफ्नो उत्कृष्ट प्रयास गरेका थियौं। तर, हामीले अर्जेन्टिनालाई केही दिन सकेनौं। सन् १९८६ यता विश्वकप जित्न नसकेपछि हामीमाथि अपेक्षाहरु थुप्रिनु स्वभाविक हो। अन्य अर्जेन्टेनी झै म पनि विश्वकप जित्दाको त्यो चरम खुशीको आनन्द महसुस गर्न चाहान्छु। सन् २०१४ मा प्रत्येक सदस्यले आफ्नो शतप्रतिशत प्रयास गरेका थिए तर पनि हामी उपाधि जित्नबाट चुक्याैं।
के अर्जेन्टिनाले २०१८ मा उपाधि जित्न सक्ला?
मेरो सपना पनि हामीले विश्वकप जितौं भन्ने छ। फाइनलसम्मको यात्रा तय गर्नु र फाइनल खेल्नु निकै कठिन हुन्छ। जुन हामीले २०१४ मा अनुभव पनि गरिसकेका छौं। अहिले पनि फाइनल सम्मको यात्रा २०१४ को जस्तै गर्ने हाम्रो सोच छ। तर फाइनलको नतिजा भने बदल्न चाहान्छौं। हामी यसपटक विश्वकप उचाल्न चाहान्छौं। यो हाम्रो पुस्ताका लागि याे अन्तिम अवसर पनि हो।
अर्जेन्टिनालाई विश्वकपको उपाधि दिलाउ नै पर्ने बाध्यताको बोझले तपाई थिचिनुभएको त छैन?
छैन्, साच्चै छैन्। यदि तपाई अर्जेन्टेनी हुनुहुन्थ्यो र फुटबल पछ्याउनुहुन्थयाे भने तपाई पनि तपाईको देशले विश्वकप उचालोस् भन्ने चाहानुहुन्थ्यो। त्यसमा कुनै अन्यथा छैन्। तर हामी सबैलाई थाहा छ, विश्वकप जित्नु कति चुनौतीपूर्ण र कठिन हुन्छ। तर पनि हामी जित्न चाहान्छौं। अर्जेन्टिना जित्न चाहन्छ। त्यसैले ममाथि अर्जेन्टेनीले अपेक्षा राख्नु स्वभाविक हो।
अर्जेन्टिनाले कुनै खेल हार्दा त्यहाँका मिडियाबाट तपाईको खुब आलोचना हुने गर्छ। त्यो तपाईका लागि कति पीडादायी क्षण हुन्छ?
अवश्य पनि त्यसले पीडा दिन्छ। तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने उनीहरु(मिडिया)ले पनि हामिले विश्वकप नदिलाएकाे जुन हामीले सञ्चार गरेका हुन्। अर्जेन्टिना फुटबलकाे राम्राे माहाेल भएकाे राष्ट्र हो। त्यहीकारण मिडियाको त्यो प्रतिक्रिया सामान्य हो। कहिलेकाहीँ मिडियाले त्यस्तो गर्दा हामीले विश्वकपको फाइनलसम्म पुग्न लगाएको सामथ्र्य बेकार थियो झै लाग्छ। तर अर्जेन्टिना भनेकै त्यही हो, जहाँ उपविजेतालाई कुनै स्थान छैन।
अर्जेन्टिना अप्ठारो समूहमा छ। तपाईका समूहमा रहेका आइसल्याण्ड, क्रोएसिया र नाइजेरियालाई कसरी लिनुभएको छ?
प्रतियोगिताका उत्कृष्ट टोलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा हामीले पनि उत्कृष्ट खेल पस्कनै पर्छ। सबै प्रतिद्वन्द्वीहरू तपाइलाई कडा प्रश्न सोध्न तयार छन् तपाईले पनि त्यसको गतिलो जवाफ दिन सम्पूर्ण तयारी गर्नैपर्छ। त्यही भएर यो विश्वकप हो। यहाँ केही पनि उपहारमा पाइँदैन्। उत्कृष्टहरुले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्छन्। समूहका देशसँग कडा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। हामी त्यसका लागि तयार छौं।
तपाईका नजरमा प्रतियोगिताको उपाधि उचाल्न सक्ने राष्ट्रहरु कुन कुन हुन्?
फुटबल सबै ठूला राष्ट्रहरु उपाधि उचाल्न उत्तिकै सक्षम छन्। अघिल्लो संस्करणको च्याम्पियन जर्मनीले पुनः एकचोटी च्याम्पियन बन्ने प्रयास गर्नेछ। स्पेनको टोली पनि उत्तिकै राम्रो छ। क्वालिफायरमा ब्राजिल, फ्रान्स र पोर्चुगलले पनि उत्तिकै राम्रो गरेका छन्।
इक्वेडरविरुद्ध ह्याट्रिक गरेपछि मेस्सी
इटाली र नेदरल्याण्ड्स जस्ता फुटबलका ठूला राष्ट्रहरुले यसपटकको विश्वकप छनोट पार गर्न नसक्दा तपाईलाई आश्चार्य लागेन?
हो, यसै कुराले विश्वकप कति कठिन छ भन्ने प्रमाणित गर्छ। इटाली बिनाको विश्वकप त कल्पनै गरिन्नथ्यो। अनि नेदरल्याण्ड्स भनेको त ब्राजिल ओलम्पिकको सेमिफाइनलमा पुगेको टोली हो। हामी उनीहरुलाई पेनाल्टीमा पराजित गर्दै फाइनल प्रवेश गरेका थियौं। रुस विश्वकपमा इटाली र स्वीजरल्याण्ड्सलाई धेरैले ‘मिस’ गर्नेछन्। उनीहरुका समर्थकले विश्वकपमा विशेष रौनक थप्ने गर्थे।
विश्वकपमा स्थान पाउनु अर्जेन्टिनाका लागि पनि निकै मुस्किल रह्यो। इक्वेडरविरुद्ध तपाइँले ह्याट्रिक नगरेको भए त यो विश्वकप अर्जेन्टिनाले गुमाउने अवस्था थियो हैन्?
छनोटका सुरुवाती खेलहरुमा राम्रो प्रदर्शन राम्राे हुन नसकेपछि हामीलाई अन्तिम खेल(इक्वेडरविरुद्ध) जित्नैपर्ने थियो। त्यो खेलमा हामीले योजना बनाएअनुसार मैले ती गोलहरु गरेँ। टीमले गर्दा त्यो सम्भव भएको हो। हामी सबैमा अर्को विश्वकप खेल्ने ब्यग्रता थियो। विश्वकप नै अन्तिममा सबैको लक्ष्य हुन्छ। उक्त खेल जित्दै विश्वकपमा छनोट भएपछि हामी निकै खुशी भयौं। हामीलाई प्लेअफको तनाब पनि रहेन।
क्रोयोसिया र अर्जेन्टिना एउटै समूहमा परेपछि क्रोयोसियाका इभान राकिटिक, जो बार्सिलोनामा तपाइँका सहकर्मी पनि हुन्। एउटै क्लबबाट खेलिरहेका साथीहरु विपक्षी भएर विश्वकपमा भिड्न लागेपछि तपाईसँग उनको प्रतिक्रिया कस्तो रह्याे?
त्यस्तो केही रहेन। इभान राम्रा खेलाडी हुनुका साथै समर्पित टीममेट पनि हुन्। उनी लडाकु खेलाडी पनि हुन्। उनीसँगको भिडन्तमा पक्कै उनले मलाई मेरो नेचुरल गेम खेल्न दिने छैनन्। तर, हाम्रा तर्फबाट पनि उनले त्यतिकै चुनौती पाउनेछन्। बार्सिलोनामा सँगै अभ्यास गर्दा हामीले केही मिठा पलहरुसँगै बिताएका छौं। खेलका बारेमा छलफल गरेका छौं। बस् त्यति हो।